J: Poem - ခေါက်ဆွဲသုပ်
အာ မဖြစ်ဘူး ၀လွန်းလို့ ဝိတ်လျော့နေတယ်
ဂျေကတော့ လွှတ်တယ် ... :)
I do not know whether to feel poetic or hungry anymore.
J seems to get mixed up with heart and stomach.
Do not challenge us to write poems!
every one hasapoetic mind.
every one likes food as well
ဂွတ်ရှယ်... ဂျွတ်တယ်... လွှတ်တယ်... လို့ပဲ ပြောရတော့မယ်။
ကောင်းတယ်ဝေ စားလိုက်တာအီသွားတာပဲနော် ဆက်ရေးနော် အားပေးတယ်သိလား
ကောင်းလိုက်တဲ့ကဗျာပဲ။ အ၀စားသွားတယ် ဂျေရေ။
မြတ်နိုးရေ မာမီသုတ်ပေးတဲ့ ခေါက်ဆွဲသုပ်ကို လွမ်းတယ် ဆိုကထဲက ဘယ်နှယ့်လို့ ကိုယ်တိုင်သုပ်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက် နိုင်မတုန်း။ သူ့ ပြောရင်း နိုချင်ရာပြီ ဗြဲ
မထိန်းနိုင်ကိုက်မိတာ မုန်းပါနဲ့ ” ဆိုပါ့လား
ကျောင်းဆရာကြီးပါလား ကိုဂျေ ရေ…။အဲ ကြောက်ဆရာကြီးပြောတာ။
ကြာဆန်ရော ခေါက်ဆွဲသုပ်ကို ဖတ်ရှုခံစား သွားရည်များ သိမ်းဆည်းသွားပါတယ်..း)
မထိန်းနိုင်ကိုက်မိတာ မုန်းပါနဲ့ ”
တန်းပြောရင် ရက်စက်ရာ ကျမှာစိုးလို့ ၊
အသုပ်စားရင်း ကြက်သွန်ဖြူကို ကိုက်တာ ပြောတာပါ။